दुःखमा नेपालको साथ पाएपछि चीन नतमस्तक, भावुक हुँदै राजदूतले के भनिन् ? - Deshko News Deshko News दुःखमा नेपालको साथ पाएपछि चीन नतमस्तक, भावुक हुँदै राजदूतले के भनिन् ? - Deshko News
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लडिरहेको चीनले नेपालको साथ र सहयोगको प्रशंसा गरेको छ । खासगरी नेपाली नागरिकबाट सदभाव र शुभेच्छा देखेपछि चिनियाँ राजदूत भावकु नै बनिन् ।
चीनलाई सान्त्वना दिने तथा चिनियाँ र नेपाली नागरिकहरुको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले बुधबार राष्ट्रियसभा गृहमा ‘हामी साथ छौं’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा भूमीसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छी, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला, नेकपाका नेताहरु आनन्द पोखरेल, यज्ञराज सुनुवारलगायत सहभागी थिए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालीले देखाएको सद्भावले चिनियाँ राजदूतलाई भावुक बनायो । सम्बोधनका क्रममा राजदूत होउ यान्छीले कोरोना भाइरसविरुद्धको चीनको लडाईमा नेपालले गरेको सहयोगको सह्राना गरिन् । उनले भनिन्ः नेपाल र चीन सुख, दुःखका साथी हुन् ।